Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Sergio Ramos Childhood Story Plus tsy azo fantarina
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Cuqui". Ny tambajotran'i Sergio Ramos Childhood ny tantara momba ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy misy vitsivitsy ihany no mihevitra an'i Sergio Ramos Biography izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Sergio Ramos García dia teraka tamin'ny andro 30 tamin'ny 1986 tamin'ny volana martsa tany Camas, Sevilla, Espagne. Paqui Ramos (reny) ary Jose María Ramos (ray).
Rene sy Miriam.Ramos no nampiakatra ny baolina tamin'ny taona 14 ho mpiaro azy.
Hatramin'ny andro maha-fahazazany, Ramos dia nanana ny toetran'ity endrika mahatsiravina sy mahafinaritra ity.
Raha ankizy iray nihalehibe tao an-tanànan'ny mpikomy tao Seville, i Sergio dia liana tamin'ny hoe tonga mpanafika ary tsy nampianatra mihitsy momba ny baolina kitra. Afaka nahita ombilahy niady nandritra ny andro izy.
Sergio Ramos tia ny Bull Fighting
Noho ny fijery azy ho toy ny fanatanjahan-tena mampidi-doza, nanapa-kevitra ny ray aman-dreniny hisafidy izany ho karazana asa. Izy ilay zokiny lahy izay nanao ny fidiram-bola lehibe indrindra ho tompon'andraikitra amin'ny Sergio Ramos fantatray anio.
Ao amin'ny teniny, "Tamin'izaho mbola kely dia nanao asa nofinofy aho indray mandeha. Te-ho mpibaiko ombilahy foana aho fa ny reniko dia natahotra kely ho tonga mpibaiko. Rehefa avy nanoro hevitra an'i Rene zokiko lahy aho, dia nisafidy ny baolina kitra izay tsy dia mampidi-doza loatra. "
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Ny rahalahiny zokiny Rene (miasa amin'izao fotoana izao ho mpitsikilo azy) dia nandrisika an'i Sergio hanandrana ny baolina kitra. Ny ray aman-dreniny dia nandamina mpanofana tsy miankina ho azy izay nanampy azy hahita talenta miafina ao anatin'ilay lalao.
Sergio Ramos fampiofanana manokana
Ramos taorian'ny nahitany talenta iray tao amin'ny baolina dia niditra tao amin'ny club club voalohany, FC Camas. Nahatalanjona tokoa ny fahombiazany tamin'ny klioban'ny tanorany izay nahazo loka maro be ary nanatrika lehilahy maromaro tamin'ny tafatafa tamin'ny lalao.
Tao amin'ny FC Camas, dia hita fa nanana talenta baolina kitra i Sergio kely. Izany dia nahatonga an'i Sevilla handona azy.
Sergio Ramos nanokatra ny asany tamin'ny Sevilla FC eo an-toerana. Izany dia nanamarina izany tamin'ny FIFA Ballon d'Or Gala. Tao no nampiseho hery lehibe sy 2003 ary farany izy dia niantso ny ekipa voalohany. Nanohy niady i Sergio, niaro ny tenany tamin'ny zava-bita tsara, toerana iray tao amin'ny fiatombohan'ny fiantombohan'ny fiarovana marina.
Fikambanana Eoropeana maromaro no nanaraka ny fandrosoany tamin'ny fijeriny ny andro niainany Sevilla. Noho ny zava-bita tsara azony dia nahazo tolotra maro i Sergio. Io no Real Madrid mpilalao baolina kitra fanta-daza izay nanaparitaka azy tamin'ny farany. Ny ambiny, araka ny filazany, ny tantarany ankehitriny.
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Jose María Ramos (dadan'i Sergio) dia manana andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny fifanarahana Sergio. Nanampy tamin'ny fifampiraharahana goavana tamin'ny Real Madrid izy izay nahatonga fanatsarana ny fifanarahana madridista mpiaro. Izy no tompon'andraikitra amin'ny famindrana 27 tapitrisa euros ho an'i Real Madrid ao 2005. Taratasy fandraketana fandraketana izany ho an'ny zanany lahy zandriny.
Ny dadan'i Sergio Ramos, Jose María Ramos dia nahita ny zanany lahy tany amin'ny Real Madrid
Jose Ramos dia mitoetra ao amin'ny faribolan'ny faran'ny zanany raha vantany vao tapitra ny andro fahatanorany.
Sergio Ramos dia tsy hanana fanehoan-kevitra avy amin'ny fianakaviany raha manapa-kevitra ny handao an'i Real Madrid amin'ny Old Trafford izy na oviana na oviana mandritra ny asany - satria ny dadany dia mpankafy Manchester United. Talohan'ny fivorian'ny Champions League teo amin'ny roa tonta tao 2013, Ramos dia naneho ny fitiavan'ny rainy ny baolina anglisy anglisy.
Hoy izy tamin'ny Sunday Times: 'Nandeha nijery baolina kitra be ny raiko ary nilaza tamiko izy raha mbola zazakely aho: Ka dia toy izao no ataoko ao United. Ry zalahy, tsy maintsy mijery an'i Eric Cantona sy ianao David Beckham".
rENY:Milaza izy ireo fa marina foana ny reny, noho izany dia noraofin'ny mpanazatra Manchester United indray ny vaovao diso taorian'ny nanambaràn'i Sergio Ramos fa ny zanany lahy dia hijanona ao Real Madrid.
Ny renin'i Sergio, Paqui Ramos dia mpankafy Real Madrid eo amin'ny fotony. Izy, miaraka amin'ny vadin'i Sergio, dia tena mazoto miasa ao amin'ny Real Madrid, na dia mbola manohy manambara ny tsy fahafalian'i Ramos ao amin'ny Bernabeu aza ny fampahalalam-baovao taorian'ny tsy nahavitan'ny filoha Florentino Perez ny fampanantenany hamaly azy amin'ny fifanarahana vaovao sy ny fampivoarana amin'ny 2015.
Misy fifamatorana lehibe eo amin'i Sergio sy Paqui.
Sergio (lahy) sy ny fitiavan-drenin'i Pacqi
rahalahy: Rene Ramos no zokin'i Sergio. Izy no mpilatsaka an-tsitrapo ankehitriny izay mitantana ny asany. Tamin'io andro io, nihoatra lavitra an'i Sergio izy noho i Jose, ny dadany izay nandray anjara lehibe teo aloha.
Sergio Ramos rahalahin'i Rene Ramos
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, i Rene dia ny atidoha ao ambadiky ny fandraisana anjaran'i Sergio amin'ny baolina kitra.
Rahavavy: Miriam Ramos no zandriny indrindra ary rahavavin'i Sergio Ramos. Izy dia nandray anjara tamin'ny fampakarambadin'ny anadahiny ho any Pilar Rubio. I Miriam dia niasa tamin'ny maha-andevovavy azy.
Rahavavy Sergio Ramos. Mariam toy ny brides, maid
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ramos dia nifanerasera tamin'ny mpanao gazety / mpanolotra Pilar Rubio tamin'ny volana septambra 2012, ary nanamafy izany tamin'ny roa tonta FIFA Ballon d'Or Gala. Pilar Rubio dia olo-malaza amin'ny fahitalavitra, mpilalao sarimihetsika ary modely. Fantany amin'ny fandefasana ny hetsika amin'ny fahitalavitra La Sexta. Izy koa dia naka sary tao amin'ny gazetiboky lehilahy maromaro ary niseho tao amin'ny filma toy ny Isiônô & Disi, alto voltaje, Carlitos y el camp de los suenos, Cuestion de quimica ary maro hafa. Tao amin'ny 2008 sy 2009 dia nofantenana tamin'ny famoahana Espaniônan'ny gazetiboky FHM izy io ho vehivavy manambady indrindra manerantany.
Sergio Ramos sy Pilar Rubio dia nanambady an'i 2012 taorian'ny fifandraisana fohy.
Manan-janaka roa izy ireo: Sergio (teraka tamin'ny May 6, 2014) ary Marco (nateraka novambra 14, 2015).
Ny fotoam-pianakaviana ho an'ny fankalazana tretrika dia lazaina ho hafaliana lehibe ho an'i Ramos sy ny ankohonany.
Talohan'ny nialany tamin'i Pilar Rubio, Sergio Ramos dia nifandray tamin'ny modely sy ny mpilalao sarimihetsika hafa. Elisabeth Reyes (2006-2007), Carolina Martinez (2006), Nereida Gllardo (2007), Amaia Salamanca (2009) ary Lara Alvarez (2010-2012)
Sergio Ramos Fifandraisana misy tantara - Ilay tantara tsy fantatra
Sergio Ramos eo amin'ny fifandraisan'ny fiainana dia mitovitovy amin'izany Karim Benzema ary Gonzalo Higuain izay nahatoky tamin'ny ankizivavy maro talohan'ny fialany. Ny mifanohitra amin'izany Harry Kane, David Silva ary Pedro Rodriguez.
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tiavo ny gitara
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny FourFourTwo, niaiky izy fa ilay olon-tiany amin'ny fianakaviany - raha ampitahaina amin'ny zandriny sy ny fianakaviany.
Rehefa nanontaniana momba izany izy dia nilaza hoe: "Heveriko fa ny ankama- roan'ny fianakaviako no tiako indrindra. Sarotra tamiko foana ny maneho izany amin'ny tontolo ivelany; Mampiasa ny Guitare aho mba hanao izany "
Ahoana no nanehoan'i Sergio Ramos fitiavana?
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Bull Fighting
Ramos dia mpankafy baolina lavalava, izay malaza any an-tanindrazany, ary sakaizan'ny matador Alejandro Talavante. Nankalaza ny fandresena ho an'ny klioba sy ny firenena izy tamin'ny nilalaovany tamin'ny reniranon'ny matador.
Mbola mihevitra i Sergio Ramos fa ny tazo
Ramos dia sangisangy tsara ihany koa. Manana toeram-pambolena amin'ny fiantsenany ao Andalusia teratany izy, izay voatokana manokana amin'ny fiompiana soavaly Andaloziana.
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Katolika iray
Ramos dia Katolika, ary manana tatoazy Mary izay mandrakotra ny tapany ambony amin'ny sandriny havia.
Sergio Ramos mino ny tatoazy
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tattoo facts
Sergio dia fantatry ny ankamaroan'ny karazana zavakanto. Manana tononkalo maromaro eo amin'ny vatany izy.
Ny tarehimarika momba ny tatoazy Sergio Ramos
Manisy heviny maromaro ao ambadiky ny tatoazy izy. Ireo tarehimarika ireo dia akaiky ny fony. Ramos no nitarika ny tsena.32 sy no.35 rehefa any Seville, alohan'ny hidirana amin'ny Real Madrid ary manao ny laharam-boninahitra voalohany ho an'i Espaina tamin'ny taona 19. Ireo no dikan'ny tarehimarika ao an-tanany tatoazy.
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Safidin'ny fiara
Sergio Ramos nanofahofa niaraka tamin'ny Audi mpamorona alemana Audi nanome ny fiarany.
Sergio Ramos safidy fiara
Sergio Ramos Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Hery sy herimpo
Ramos dia mpilalao matanjaka ara-batana izay milefitra amin'ny rivotra, noho ny halavany sy ny fahamarinan'ny lohahevitra, ka mahatonga azy ho loza mitatao amin'ny setroka.
Sergio Ramos; Lehilahy iray manana hery lehibe
Ramos koa dia mpilalao matihanina matanjaka sy mahery setra. Manan-talenta izy, fahaiza-manao tsara ara-teknika, ary koa ny fizarana tsara sy ny fahaiza-mamaky.
Araka ny gazety Espaniola Espaniola marca, FIFA ny Ny rakitsary ofisialy dia nanamafy fa tao amin'ny 2015, Ramos dia nizotra haingana tamin'ny haavon'ny 30.6 kilometatra isan'ora, ka nahatonga azy ho iray amin'ireo mpilalao baolina kitra haingana indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny fahalemeny dia mitoetra ho famaizana azy.
Ny fahantran'ny Sergio Ramos
Nalefa mihoatra noho ny 22 izy hatramin'ny nanombohan'ny asa tany Real Madrid. Ity no isan'ny karatra mena indrindra amin'ny tantaran'ny klioba. Ary koa, ny tsy fandriam-pahalemana La Liga ho an'ny Real Madrid. Sergio Ramos no manana karatra mena indrindra ao amin'ny tantaran'i La Liga. Ny fitiavany ny karatra mena dia tsy misy farany.
Kruse avy 27, 2018 Amin'ny 4: 27 hariva
Raha fantatrao hoe iza no fahatsiarovan-dRamatoa Ramos ... ..
Tokony hisalasala amin'ny tenany izy ankehitriny.
Mazava ho azy fa ity tantara ity dia manana tantara hafa ho mpilalao mahery,
Tsy te hireharehako aho raha ao amin'ny kiraron'i Zidane ...... toa i Ramos dia nanao iraka hamono ny mpilalao iray ary i Zidane dia tokony hahatsiaro izay tsy tiany ho toy ny mpilalao, nampitandrina izy tamin'ny alàlan'i Ramos tamin'ny asabotsy omaly.
Ny olona sasany dia mihodina tsikelikely; Ramos dia iray amin'izy ireo ary tokony ho nanangona ny karenany 38 izy izy ho toy ny rakitsoratry ny ligy malaza.